Channel-Mandalay| The Man from Kathmandu (2019)
ယခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေးကတော့ Man From Kathmandu ဆိုတဲ့ကားလေးပါ…… ဒီကားလေးကတော့ အဖေနဲ့ကွဲနေတဲ့သားတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ . Action romance ကားလေးပါ Imdb rating 5.7 အထိရ ရှိထားတဲ့ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
ဇာတ်လမ်းကတော့.. ဘန်တီဆိုတဲ့ကောင်လေးက ငယ်ငယ်ကတည်း အမေနဲ့ပဲကြီးပြင်း လာရတဲ့သူပါ … သူ့အဖေနဲ့အမေ အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်လည်း သူအမေက အမေရိကန်ကို ဘန်တီ နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်… အားလုံးက ဘန်တီကို သူ့အဖေ သေသွားခဲ့ပြီလ်ု့လိမ်ညာထားပေမယ့် .. ဖခင်မေတ္တာငတ်နေတဲ့ ဘန်တီတသ်ယောက်ကတော့ သူ့ဖခင်ကိုလိုက်ရာဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားဆဲပါ….
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူ နီပေါနိုင်ငံ ကို လေယာဥ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ပါတယ်……. ဒီလိုနဲ့ နီပေါရောက်တဲ့အခါ သူ့ဦးလေးကလာကြိုတော့ သူတို့တွေ အဖိုးအိမ်ကိုသွားကြပါတယ်… ဘန်တီ ရဲ့အဖိုးက အိမ်ခြေယာမဲ့တဲ့သူတွေကို ကူညီရိုင်းပင်းတက်တယ်….. အိမ်ယာမဲ့တွေကို မြေ ပိုက်ဆံ အစရှိတဲ့ အရာတွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့သူတစ်ဦးပါ…….
ဒါပေမယ့် ဘန်တီ ရဲ့အဖိုးထောက်ပံ့နေတဲ့ အိမ်ခြေရာမဲ့တွေနေထိုင်တဲ့မြေကို… အပိုင်သိမ်းချင်နေတဲ့ မြို့ထဲက …. မျက်နာဖုံးသူဌေး တစ်ယောက်ကလည်းရှိနေပါတယ်………. နောက်ပြီတော့ နာမတာ ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကလည်း ဘန်တီရဲ့အဖိုးနဲ့အတူတူ အလုပ်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူပါ……
ဒီလိုနဲ့ ဘန်တီ သူ့အဖိုးကို သွားပြီးတော့ တွေ့လိုက်ချိန်မှာ….. နာမတာ ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို မြို့ သူဌေးဖြစ်တဲ့ အဘူ ဆိုတဲ့ တပည့်တွေက နှောက်ယှက်နေတာကိုတွေ့လို့ ဘန်တီက ၀င်ကယ်ခဲ့ပါတယ်…… ဒီလိုနဲ့ဘန်တီ တစ်ယောက် အရှုပ်ထုပ်တွေကြားထဲရောက်သွားတဲ့အခါ…. ဘာတွေဖြစ်လာမလည်း…. ဘန်တီ ရုန်းထွက်နိုင်မလားဆိုတာ…… နာမတာ နဲ့အချသ်ရေးကတော့ အဆင်ပြေလာမလားဆိုတာ…… ဇာတ်လမ်းလေးကို ကြည့်ရှုရင်း ရင်ခုံခံစားလိုက်ပါဦး…..